पुर्खाले बेच्थे, अहिले आयात किन ? - Samadhan News
पुर्खाले बेच्थे, अहिले आयात किन ?
समाधान संवाददाता २०७६ असार १६ गते १३:१३
शुक्लागण्डकी ८ का २ स्थानमा रोपाइँ महोत्सव भएको छ । राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा आयोजित महोत्सवमा बोल्ने वक्ताले धान उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले उर्वर भूमि क्रंक्रिटमा रुपान्तरण हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गरे ।
ढोरफिर्दी टोल विकास संस्थाले फिर्दीमा आयोजना गरेको ढोरफिर्दी रोपाई महोत्सवमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य केदार सिग्देलले सरकारले उत्पादनमा वृद्धि नगरी समृद्धि हासिल नहुने बताए । सांसद सिग्देलले ५ दशकअघि अन्न बेचेर खाने नेपालले अहिले १ खर्ब ४० अर्बको आयात गर्ने बताए । ‘हाम्रा अग्रजले खेती गरी अनाज बेचेर आम्दानी गर्थे,’ उनले भने, खेतबारी यिनै हुन, फाँट यिनै हुन् । तर अहिले बाहिरबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था विडम्बना हो ।’
उनले नेपालमा करिब ५० लाख क्विन्टल धान आवश्यक रहेकोमा हाल करिव ४० लाख क्विन्टलमात्र उत्पादन हुने बताए । नेकपा नेता श्रीप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले स्वदेशमै केही गर्न चाहने व्यक्तिलाई विभिन्न अवसर दिएको बताए । उपमेयर सविता रसाइलीले स्थानीय तहले उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । वडा नं. ८ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले उर्वर भूमि जोगाउनै चुनौती भएको सुनाए । स्थानीय शिव शंकर बानियाले उत्पादन घट्दै जानुमा अव्यस्थित प्लटिङ र जथाभावी भवन निर्माण मुख्य कारण भएको उल्लेख गरे ।
महोत्सवमा भएको ३० वर्ष मुनिका पुरुषको हिलेदौडमा सुमन पुन प्रथम भए । ३० वर्षमाथिका लागि भएको प्रतियोगितामा सोमबहादुर भुजेल र ५० वर्षमाथिका लागि आयोजित दौडमा रामबहादुर बानियाँ प्रथम भए । धान दिवसकै अवसरमा मिलन कृषक समूहले लालिममा चौथो रोपाइँ महोत्सव गर्‍यो । कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीले व्यवसायिक खेतीतर्फ लाग्न आग्रह गरे । आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नवराज पण्डितले नगरले उत्पादन वृद्धिका लागि जमिन चक्लाबन्दी गर्ने नीति लिएको बताए ।